Home » Hawaii Travel News » Ahoana ny fomba hialana amin'ny tsipika fahatongavana COVID-19 any Honolulu sy Maui
Mihombo indray ny morontsiraka sy ny hotely any Hawaii, mazava ho azy fa ilaina ny manalavitra ny fiaraha-monina sy ny sarontava. Ny antony iray dia ny safidy vaovao amin'ny fahatongavan'ireo mpandeha fiaramanidina hamaky ny tsipika lava handiovana ireo fanamarinana sy fanontaniana COVID-19. United Airlines, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines ary Southwest Airlines dia ao anatin'ity tetik'asa ity.
Ireo mpandeha fiaramanidina tonga any Honolulu na i Maui dia manana fomba iray hihoarana ny fizahana fizahana COVID-19 sy ny fanotaniana rehefa manidina sidina sasany.
Izay natolotry ny United Airlines, Hawaiian Airlines ary Alaska Airlines dia atolotra ihany koa ho an'ireo mpandeha Southwest Airlines. Ity dia hialana amin'ny tsipika lava any Honolulu sy Maui aorian'ny nahazoana mialoha mialoha ny fahatongavany alohan'ny handaozany ny tanibe amerikana.
Ny Southwest Airlines dia manana "mety" amin'ny fehezan-dalàna voalaza ao ary mangina momba izay mety hahatongavan'ity "angamba" ity.
Toa ny United Airlines, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, ary Southwest Airlines dia mety ho lasa zotram-piaramanidina manintona indrindra manidina mpitsidika an'i Hawaii, mba hahafahan'izy ireo mahazo lohandohany amin'ny fialan-tsasatra Hawaii azy ireo mankany amin'ny Waikiki Beach, Wailea, na Kaanapali Beaches.
Raha ny fampitam-baovao voaray nataon'ny Southwest Airlines dia manamora kokoa ny fahazoan'ny mpandeha azy mankany amin'ny hotely fialantsasatra Hawaii izao ny zotram-piaramanidina.
Ny zavatra tsy lazain'i Southwest Airlines amin'ny famoahana azy dia ity serivisy ity dia efa azon'ny mpandeha fiaramanidina mpifaninana toa an'i United Airlines, Alaska AIrlines, ary mpandeha Hawaiian Airlines.
Southwest Airlines dia manaraka zotram-piaramanidina hafa ary manome ny mpandeha azy fotoana hanehoana ny fanarahan-dalàna ataon'izy ireo Fitsangatsanganana an-tsokosoko any Hawaii programa alohan'ny handaozany ny tanibe amerikana akory.
Ireo mpanjifa izay nampakatra valim-panadinana COVID-19 ratsy voamarina izay mitaky fampahalalana momba ny dia sy namita ny fangatahana fahasalamana alohan'ny hiaingany ny tanibe dia afaka mahazo mandingana ny fizahana seranam-piaramanidina rehefa tonga any Honolulu (Oahu) sy Kahului (Maui).
Ny teny lakile dia "angamba" - fepetra voatondron'ny Southwest Airlines. eTurboNews nanandrana nanamarina ilay "angamba", fa ny Southwest Airlines tsy nisy hevitra.